ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့အခမ်းအနားနှင့် ကရင်ရိုးရာဂျပ်ခုတ်ပြိုင်ပွဲကို ဘားအံမြို့၌ စည်ကားသိုက်ြ - Yangon Media Group
ဘားအံ၊ ဇန်နဝါရီ ၆- ကရင်သက္က ရာဇ် ၂၇၅၈ခုနှစ်၊ ကရင်နှစ်သစ် ကူးနေ့အခမ်းအနားနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် ပထမအကြိမ် ကရင်ရိုးရာဂျပ် ခုတ်ပြိုင်ပွဲကို ဘားအံမြို့၌အစဉ်အ လာမပျက် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ အခမ်း အနားကို ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် နံနက် ပိုင်းတွင် ဘားအံမြို့ သီရိကွင်း၌ ကျင်းပရာတွင် ကရင်အမျိုးသား အလံတော်ကို အရုဏ်တက်ချိန်တွင် တိုင်ထိပ်သို့ လွှင့်တင်၍ ကရင်ပြည် နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေး မြင့်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောချစ်ခင်၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည် နယ်ဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန် ရှိသူများနှင့် ဒေသခံ ကရင်တိုင်းရင်း သူ၊ တိုင်းရင်းသားများက အလေးပြု ခဲ့ကြပြီး ကရင်ရိုးရာနှစ်သစ်ကူး မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။
ယခုနှစ်ကရင်ရိုးရာ နှစ်သစ် ကူးနေ့ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်မှ နှစ်သစ်ကူးသဝဏ် လွှာပေးပို့ခဲ့ပြီး ဘားအံမြို့အပြင် က ရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ နှင့် မွန်ပြည်နယ်သထုံမြို့နယ်တို့ တွင်လည်း ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ၊ အား ကစားပြိုင်ပွဲများ ကရင်ရိုးရာဒုံးယိမ်း အကပြိုင်ပွဲများအား ထည့်သွင်း၍ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ သည်ကိုတွေ့ရသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကြီးမှူး၍ ပထမအကြိမ် ကရင်ရိုး ရာဂျပ်ခုတ်ပြိုင်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၅ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက ဘားအံမြို့ ရှိ ရက်ကန်းနှင့်အသက်မွေး ပညာ သင်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ဘားအံမြို့နယ် တာလဂုဏ်၊ မှိုင်း ကံ၊ အထက်ကော့ရင်း၊ ရိုးမဟာ နှင့် တောင်ကလေးကျေးရွာ၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှ ကျုံဒိုးနှင့် လေးတိုင်ကျေးရွာ၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့ နယ်၊ မဒဲကျေးရွာနှင့် သံတောင် မြို့တို့မှ ပြိုင်ပွဲဝင် ဂျပ်ခုတ်အဖွဲ့ ၂၄ ဖွဲ့တို့ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြ ကြောင်း သိရသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ကျဆုံးသွားသောအမှတ် (၃) နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှ ရဲမှူးစ??
ဘရာဇီး နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း မီးလောင်မှုတွင် အသက်စွန့် ကယ်ဆယ်ခဲ့သည့် ဆရာမကို သမ္မတက ဂုဏ်ပြုဆု??